Orchard ugbo | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Orchard ugbo
Mkpụrụ vaịn: ole calorie ole, ihe vitamin dị, ihe dị mma maka, esi esi bee, nke anaghị ekwe omume iri
Mkpụrụ vaịn bụ mkpụrụ nke osisi mgbe ọ dị elu ruo mita 15, na-eto na belt subtropical. Nke a citrus e nwetara site enweghị usoro gafere ọzọ citrus mkpụrụ - pomelo na oroma. N'ihe dị ka narị afọ nke 18, onye ụkọchukwu bụ Griffiths Hughes, bụ onye kpọrọ mkpụrụ a "mkpụrụ osisi ahụ a machibidoro iwu," kọwaara ya.
Ị nụtụrụla Chizhov pear? Ma eleghi anya i nweela obi uto ya ma nwee ọchịchọ ịkụ osisi dị otú ahụ n'ụlọ gị? N'isiokwu anyị, anyị ga-atụle ihe niile dị mkpa maka nke a. Nkọwa nke mkpụrụ (uru, ọghọm) Chizhovskaya ube-ngwakọ, bred site Russian breeders, nke e nwetara site na-agafe abụọ mma iche.
Pear Lada Onye ọ bụla na-atụ anya ka oge opupu ihe ubi, oge ọkọchị, iji nwee obi utọ ọ bụghị naanị oge okpomọkụ na ụbọchị ọma, kamakwa iji rie nri na onyinye. N'ezie, onye ọ bụla chọrọ iji ọsọ na-amị ụdị ụdị mkpụrụ osisi na ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ubi, ndị na-elekọta ubi na-amakarị na-ebutekwa owuwe ihe ubi. Ọ bụ n'ebumnuche dị otú ahụ ka Lada pear dịgasị iche iche apụtaghị otú ahụ ogologo oge gara aga.
Taa, site na mmepe mmepe nke ịzụlite, ọtụtụ ndị nnọchiteanya nke ubi ugbo na-apụta. Maka ihe okike ha jiri ihe dị iche iche mepụtara. Ihe ọhụrụ dị iche iche na-eme ka uto dịkwuo mma, na-edozi nguzogide ọrịa dị iche iche Otu n'ime ihe ndị a bụ isi bụ ube "Bergamot".
Pear Talgar mma
Onye nke oge a, onye na-eche banyere ahụike ya, kwesịrị ịhọrọ ihe oriri. A na-etinye pears na nri gị n'ihi ọnụnọ ọtụtụ ihe bara uru na pulp na akpụkpọ mkpụrụ ndị a. E nwere ọtụtụ ụdị mkpụrụ osisi a, mana otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị amara ka bụ Talgar Mma dị iche iche.
A maara na nri kwesịrị ekwesị bụ akụkụ nke "ntọala" nke ahụike mmadụ. Otu akụkụ dị mkpa nke ndụ ndụ dị mma bụ iji mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ọ bụ site na nri ndị a na mmadụ na-enweta ihe ndị a maara dị ka vitamin. Oge okpomọkụ bụ oge kacha mma maka okooko na ịmị mkpụrụ nke osisi dị iche iche na bushes.
Onye ọ bụla nke na-elekọta ugbo na-agbalị ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ihe ubi ndị "na-adị ndụ" n'ala ya. N'ihi ya, mmasị n'osisi ndị na-amị mkpụrụ na-arịwanye elu nke nta. Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na saịtị ọ bụla na-eto ụdị osisi apple, plums, pears, cherị na mkpụrụ osisi ndị ọzọ na beri.
Taa, onye ọ bụla chọrọ ịmepụta ogige nke aka ya achọghị ihe ọmụma na nkà pụrụ iche. E kwuwerị, na nlekọta kwesịrị ekwesị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nnọchianya niile nke ubi a kụrụ n'ubi na-amịpụta ezigbo ihe ọkụkụ. Ọtụtụ osisi osisi dị iche iche nwere ike ibuwanye na ihu igwe anyị. Ọbụna onye nnọchiteanya a "dị n'ebe ugwu" dị ka Ugwu Ussuri nwere ike ịgbanye mgbọrọgwụ n'ubi anyị.
Ọ bụ mmadụ ole na ole na-enwe obi ụtọ banyere okpomọkụ, anyanwụ, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ. E kwuwerị, kemgbe ọ bụ nwata, a gwara onye ọ bụla n'ime anyị na mkpụrụ ọrụ ugbo bara uru maka ahụ anyị. Mkpụrụ ma ọ bụ akwukwo nri ọ bụla nwere mkpụrụ nke vitamin na mineral. Ya mere, maka ahụike zuru ezu mgbe oyi oyi na avitaminosis gasịrị, ịkwesịrị ịmepụta ngwaahịa ndị a na nri gị.
Kedu ka esi eme ka ndị Katọlị bụrụ ndị nkịtị, anyị na-amụ ụzọ
Otu esi eji osisi aki oyibo: uru nke iji ihe ubi na akwukwo ulo
Nkọwapụta na njirimara nke ewu ewu na-eguzogide oyi na-eguzogide ọgwụ dị iche iche nke tomato "Sanka"
Otu esi eme ọdọ mmiri na saịtị
Kedu ka ị nwere ike isi nweta mkpụrụ nke tarragon dị mma n'akụkụ osisi ndị ọzọ? Na-eto eto tarragon n'ụlọ
Red Cor carrot dịgasị iche iche: nkọwa, ịkụ mkpụrụ, nchekwa nke ihe ọkụkụ na nuances ndị ọzọ
Lagenariya: mejupụtara, uru, ngwa
Ngwurugwu nke igbu egbugbere ọnụ site na mmiri ozuzo: na ọnọdụ okpomọkụ ka ha na-anwụ ma na-atụ egwu nke ntu oyi?